San Htun's Diary: Purdue သွား တောလား...
ပန်းတွေ တအားလှတာဘဲ အမျိုးကို စုံနေတာဘဲ..
ခရီးသွားတာ အစစ အဆင်ပြေပါစေနော်.
အလုပ်အကိုင်လည်း အဆင်ပြေပါစေ.. ဓာတ်ပုံတွေလည်း အများကြီးရိုက်နိုင်ပါစေ..
ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်တွေ အရမ်းကောင်းတယ် အားကျထှာနော်
အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်စာရင်းထဲမှာ..စန်းထွန်း မျက်စိလည်သွားလို့ ရှာမတွေ့တာနေမယ် အောက်ကနေစရေရင် တွေ့ရင်တွေ့နေမှာ...:P
ဟိုနေ့က လင့်ခ်တက်လို့ လာချောင်းတော့ ပို့စ်က မတက်ဘူးပဲ...အခုမှပဲ ဖတ်ရတော့တယ်...သူများ တက္ကသိုလ်ကိုကြည့်ပြီး တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့ တွေးမိရဲ့...မသေခင် အနှီကျောင်းကြီးတွေမှာ တစ်ခါလောက်တော့ အစွမ်းပြခွင့်ရချင်သား...ဘော်စတွန်သွားတောလားကိုလည်း မျှော်နေပါကြောင်းဗျား...
ကိုယ်တို့ တော့ အီးဂလိတ်ဆိုတောင်၊
အေဘီစီ တောင်ဖြောင့်အောင်မနဲ ဆိုရတယ်။
မြန်မာတက္ကသိုလ်တွေလဲ အဆင့်စာရင်းထဲ ပါဝင်လောက်ပါတယ်။ သူတို့ မရေတွက်ကြလို့ပါ။ ဥပမာ အာရှအဆင့် တစ်ထောင် နှစ်ထောင် စသဖြင့်ပေါ့။း)
သွားလာ စားနိုင် ရိုက်နိုင် ရေးနိုင် တင်နိုင်ပါစေဗျာ။
အမ်..... အစ်ကို ဆန်းထူးက ဆေးလိပ်သောက် သလား။ :P
ဆင်ပြာတော်ဂျီး မ လာခဲ့ပါဗျာ။
I haveaproblem with Burmese font and I don't know why. Anyway I enjoy reading about the school and seeing beautiful flowers. I love purple flowers and my school has them too.
I forgot to say about the bird. It is called "American Robin", which is quite common in here too.
ကျောင်းတော်ကြီးကို အားကျစွာနဲ့လာကြည့်သွားပါတယ် တစ်နေ့တော့ ခြေချနိူင်ခွင့်ရနိူင်ကောင်းရဲ့ ခုလောလောဆယ်တော့ Ivy Tech မှာ အသည်းအသန် ခဲမှန် လုပ်နေတုန်း